“Tolomoge Kaligay Baa Kaga Jiray ONLF” Sidaasi Waxaa yidhi Cabdi-Nuur Maxamed Soyaan – Rasaasa News
Mar 14, 2010 Ina Dhuubo, Jwxo-shiil, ONLF, sooyaan
Kooxda xaar walwaal ee uu madaxda u yahay Jwxo-shiil, oo ka xanaaqay waraysigii maxbuus Cabdi-Nuur Soyaan, kana yaaban in la siidaayo, ayaa doortay in ay dabin kale u maleegaan, sidee ayeyse beesha Sooyaan u aragtaa?
Maalmo ka dibna waraysigiisii, waxaa ay kooxda Jwxo-shiil, soo dhigeen boggagooda Internetka codad ay yidhaahdeen waa Cabdi-Nuur Soyaan xiligii uu xorta ahaa. Arintaas oo aad uga cadhaysiisay beesha Cabdi-Nuur Maxamed Sooyaan, oo u arkay in ay tahay dacweyn loola jeedo in la ciqaabo ama la dilo maxbuuska. Arintaas dacweynta ah ayaa waxaa wax ka qoray boggaga qaarkood, waraysina kala yeesheen dad sharci aqoon ah si ay u micneeyaan codadka Soyaan ee ay kooxda Jwxo-shiil siidaysay.
Kooxda Jwxo-shiil, ee ay ka madowdahay siyaasadu ee halkaas dhigay halgankii ay ummadu lahayd, maxay qoonsadeen oo ay horay bay u xidheena haatan ka rabaan Cabdi-Nuur?
Cabdi-nuur Soyaan sida wajigiisa ka muuqatay, ama aan ku aqaanay, waxaa loola dhaqmay si wanaagsan, waxayna u badan tahay in la siidaayo, warbixintii uu bixiyey ee ku saabsanayd kooxda Jwxo-shiil, waxaan markhaati ka ahay in ayna kalmad been ah ku jirin uuna isagu u badheedhay in uu waramo.
Sida aan la soconay qabashada Cabdi-Nuur waxaa ka dambeeyey Jwxo-shiil, kolkii la isku af dhaafay lacag loogu talo galay ciidan Eritrea laga keenay oo gudaha galayey laakiin aan shillin la siin. Sooyaan Eritrea ayaa looga yeedhay si loo xisaabtamo, xisaabtiina waa la isku fahmi waayey, Jwxo-shiila go,aan ayuu gaadhay.
Lacag dhan US$300,000 ayey Eritrea bixisay, waxayna ugu talo gashay ciidan ahaa 500, oo tababar dhamaystay gudahana u socday, in nin walba la siiyo US$600, si nin walba uu jeebka ugu jiro jiscinka uu ku dagaalamayo mudo ugu yaraan lix bilood ah. Lacagtaas waxay gacantooda gashay oo ninba in qaatay Soyaan, Qaaxo iyo Bashiir Axmed Makhtal oo ahaa wakiilka Jwxo-shiil. Lacagta waxaa garab socday hub badan oo nooc walba leh Bashiir baana maxkamadihii Islamiga kaga iibiyey Xamar. Ciidankii loogu talo galay markii ay gudaha galeen ee ay gaajo iyo rafaad la kulmeen ayey kala tageen.
In khilaaf jiray lagu basaasay Sooyaan oo Itobiya looguna gacan galiyey waxaa daliil u ah, in maalinkii la qabtay Sooyaan, Ina dhuubo uu waraysi siiyey BBC kuna cadeeyey in rag golaha dhexe ah laga qabtay, warsaxaafadeedna way soo saareen. Waxaa iyana yaab leh in kolkii dhawaan Sooyaan oo xabsi ku jira waran la yidhina, ay kooxdu soo bandhigeen codadkii uu ku caayey cadowga maanta haysta. Waxaana la yaab leh in ilaa iyo maanta Bashiir Axmed Makhtal ay kooxda Jwxo-shiil qarinayaan in uu ka tirsanaa, oo ay qoyskiisii ku doodayaan waxaa uu ahaa nin dharka huudhayga ah ka ganacsada.
Horaan idiinku sheegnay “ma haan haantaas arkaysa ayaa biyo celin” kolka raga ilma adeerka ah la kala fadilo, oo cadaalad daro cad ay muuqato, ragii halganka wadayna la hogeeyey Jwxo-shiil in uusan halgan wadin ee uu aarsi ku jiro cid walba way u cadahay.
Dr. Dolal, oo Ogadeen iska daayee ay Somali oo dhan ku faani jirtay, waxqabadkiisa iyo heerarka uu la soo maray dhisida halganka Somalida Ogadeeniya, kuna daray Jwxo-shiil ururka ONLF, abaal gudkii Jwxo-shiilna waxaa uu noqday in rag beeshiisa ah [reer Haaruun] uu u adeegsado dilka Dr.Dolal, oo aan marna ku talo galin in xabad Ogadeen ay disho.
Tolomoge daw buu u leeyahay in uu ka cadhoodo codadka hore ee Sooyaan iyo sifaha foosha xun ee kooxda Jwxo-shiil ula dhaqmaayso, isaga oo gacan cadow ku jira. In Sooyaan uu cadow u gacan galana Jwxo-shiil baa ka shaqeeyey, waxaana xaqiijinaya sida uu uga hortagayo in la siidaayo.
Kooxda Jwxo-shiil iyo Safaarada Itobiya oo kulan uga bilowday Nairobi